လျှောက်လွှာကိုအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်ခြင်းမပြုဘဲ WhatsApp တွင်မမြင်နိုင်ပါ Androidsis
လျှောက်လွှာကိုအသုံးမပြုဘဲ WhatsApp တွင်မမြင်နိုင်ပါ
Rafa Rodriguez Ballesteros | | Android application များ, လဲ tutorial, Whatsapp
နီးပါးဆက်ဆက်ကအချို့အချိန်များတွင်ငါတို့ရှိသမျှသည်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ထိုလေးလံသောမိတ်ဆွေကကျွန်ုပ်တို့ကို“ အွန်လိုင်း” မြင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အားမမေးစေလိုပါ။ ဒါမှမဟုတ်ဘယ်သူ့ကိုမှစိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေဘဲကြန့်ကြာနေတဲ့စကားဝိုင်းတွေကိုတိတ်တဆိတ်ဖတ်ချင်တယ်။ ငါတို့သည်အချို့စဉ်းစားနိုင်ပါတယ် အခြေအနေများ ပိုပြီးသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းမသက်မသာ အရာအတွက်ကျနော်တို့ WhatsApp ကိုအပေါ်သတိမပြုမိသွားချင်ပါတယ်.
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာကဒီဆော့ဝဲကို "ဆိုင်းငံ့" မထားဘူးဆိုရင်၎င်းကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ WhatsApp မပါဘဲကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်နိုင်တော့မည်မဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိထားကြသောကြောင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သင့်အားပေးလိမ့်မည်။ အနည်းငယ်လျော့နည်းထိန်းချုပ်ထားခံစားရရန်အချို့သောအကြံပေးချက်များ.
1 WhatsApp သည်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သည်ထက်ပိုပြီးထိန်းချုပ်သည်
2 အချို့သောချိန်ညှိချက်များသည် WhatsApp အားသင်မထိန်းချုပ်နိုင်အောင်ပြုလုပ်လိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည့်အရာများထဲမှတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးဆက်သွယ်မှုဖြစ်သည့်အခါလျှောက်လွှာကဖော်ပြသည်။ ၎င်းသည်လျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းအပြင်စုံတွဲတစ်တွဲအနေနှင့်လည်းအချို့သောဆွေးနွေးမှုများကိုဖြစ်စေနိုင်ခဲ့သည်။ အမှန်မှာ၊ ဤလျှောက်လွှာ၏ဆက်တင်များမှကျွန်ုပ်တို့သည်ဤသတင်းအချက်အလက်များကိုအခြားအသုံးပြုသူများမြင်သာအောင်မပြုလုပ်နိုင်ပါ။
များစွာသောသူများအတွက်အခြေခံကျသောပြောင်းလဲမှုများသည်အခြားသူများအတွက်အမှန်တကယ်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်, သင်၏နောက်ဆုံးဆက်သွယ်မှုကိုမမြင်တွေ့စေလိုလျှင် သငျသညျအောက်ပါလုပ်ဖို့ရှိသည်။ မှရယူသုံးစွဲခြင်း "Settings"> "account"> "privacy"> "last time"။ ဤရိုးရှင်းသောအမူအရာဖြင့်သင်၏နောက်ဆုံးဆက်သွယ်မှုကိုမမြင်နိုင်ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်၏နောက်ဆုံးဆက်သွယ်မှုကိုမည်သူမျှမမြင်နိုင်ပါ သငျသညျဖြစ်စေကြွင်းသောအရာမြင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ.
ကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်တည်ရှိမှုအတွင်းကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားရမည့်အခြားအရာတစ်ခုမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုရုပ်ပုံ။ ချိန်ညှိချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့မပြုပြင်ပါက၊ ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းနံပါတ်ရှိသောမည်သူမဆိုလျှောက်လွှာတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများကိုကြည့်ရှုနိုင်မည်။ ဒါကငါတို့လည်းပြောင်းလို့ရတယ်။ တူညီသောမီနူးအတွင်းရှိ«အကောင့်»နှင့်« privacy »အတွင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆက်အသွယ်များကသာမြင်နိုင်ကြောင်း select လုပ်ပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသောမည်သူမျှကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကိုမြင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
WhatsApp ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ပြီးကတည်းကသုံးစွဲသူများမနှစ်သက်သောအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိသည်။ အပြာရောင်နှစ်ချက်စစ်ဆေးမှုနှင့်အတူဖတ်အတည်ပြုချက်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းစကားကိုမည်သည့်အချိန်တွင်ဖတ်ရှုသည်ကိုသိရန်အဆင်ပြေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရေးသောသူကကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ပြီးကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားမသိစေလိုလျှင်ကော။ လွန်းဒီရှောင်ရှားရန် ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင့်၏ privacy settings မှစာဖတ်ခြင်းအတည်ပြုချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပယ်ဖျက်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးဆက်သွယ်မှုအချိန်ကာလနှင့်အမျှ ဤရွေးချယ်မှုအားပိတ်ထားပါကအခြားသူများ၏ဖတ်ရှုခြင်းအတည်ပြုခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မမြင်နိုင်ပါ.
အချို့သောချိန်ညှိချက်များသည် WhatsApp အားသင်မထိန်းချုပ်နိုင်အောင်ပြုလုပ်လိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရသောအတိုင်း၊ messaging application ကိုထူးကဲစွာကျွန်တော်တို့ကိုအနည်းငယ်သာပေးခွင့်ပြုသည့်အချို့သောချိန်ညှိချက်များရှိသည်။ ဒါကြောင့်အနည်းဆုံးတော့သူတို့အကြောင်းကိုသူတို့အကြောင်းကိုသိစေချင်တဲ့အခါ၊ ဘယ်အချိန်မှာမသိရတာကိုရွေးချယ်ရမယ်။ အခြားသူများအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိလိုသော်လည်းပြusနာမှာကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းမသိစေလို။ ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားသူများထံမှသတင်းအချက်အလက်ရယူရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်သီးသန့်လုံခြုံရေးကိုစွန့်လွှတ်ရမည်။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏သူငယ်ချင်းများ၏နောက်ဆုံးဆက်သွယ်မှုကိုသင်သိလိုပါက၎င်းတို့နှင့်သင်၏မိတ်ဆွေများကိုမသိသော်သင်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိနေသေးသည်။ ဒါကိုလုပ်နိုင်တဲ့ application တွေရှိတယ်။ သူတို့ကသင့်အား Application ၏ပြင်ပမှ WhatsApp စာများကိုဖတ်ရန်သင့်အားခွင့်ပြုသည်။ ထို့ကြောင့်ပေးပို့သူသည်ကျွန်ုပ်တို့မလိုချင်ပါက၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ပြီးကြောင်းမည်သည့်အခါမျှမသိနိုင်တော့ပါ။
အထူးချွန်ဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးတွေ့ရှိချက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် Stealth အက်ပလီကေးရှင်း။ သူ့ရဲ့အခမဲ့ဗားရှင်းမှာတော့ငါတို့ပြောတာကိုခွင့်ပြုထားတယ်။ WhatsApp စာတိုများကိုဒီအပလီကေးရှင်းမှနှစ်ဆအပြာရောင်မနှိပ်ဘဲပေးပို့သူထံသို့မရောက်ရှိနိုင်ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သင် WhatsApp ကိုသုံးရမယ့်စာတွေကိုဖြေရန်။ ဒီအပလီကေးရှင်းသည်ခေတ်နောက်ကျသော်လည်း၎င်းသည်၎င်း၏အဓိကလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုပြည့်မီစေသည်။
Stealth App တွင်ကြော်ငြာများပါ ၀ င်ပြီးမသက်မသာဖြစ်နိုင်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပရိုဂရမ်တစ်ခုထပ်မံတွေ့ရှိရပြီး၎င်းမှာလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအချို့ရှိသည်ဟုကတိပြုသည်။ အဆိုပါရယ်စရာအရာဖြစ်၏ ဒီ application ၏ပေးဆောင်ထားသော version သည် WhatsApp application ထက်ပိုမိုစျေးကြီးသည်။ အဲဒါကိုလိုအပ်တယ်လို့သင်ယူဆပါသလား
ဒီ post ရဲ့အစမှာငါတို့ပြောခဲ့သလို "ပျောက်ကွယ်သွားဖို့" အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက WhatsApp ကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်မင်းတို့အဲဒါကိုမလုပ်ဘူးဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ ဒီနေရာမှာမင်းတို့ကိုပိုပြီးရှင်သန်နိုင်မယ့်ရွေးချယ်စရာတွေချန်ထားခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ အခြားသူများမြင်တွေ့နိုင်သည့်သတင်းအချက်အလက်များ၏ privacy ကိုသင်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ကြွန်တော်တို့ကျန်အရာများနှင့် ပတ်သတ်၍ ဘာမှမသိရှိခြင်းအားအရှုံးမပေးရန်သင်အားကျွန်ုပ်တို့ပေးပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » လျှောက်လွှာကိုအသုံးမပြုဘဲ WhatsApp တွင်မမြင်နိုင်ပါ
သင်အွန်လိုင်းရှိနေစဉ်ထိန်းချုပ်ခြင်းကိုမနှစ်သက်ပါ။ WhatsApp Ninja ဖြင့်လွယ်ကူစွာရရှိသည်။ ဤလျှောက်လွှာအားဖြင့် WhatsApp စာတိုများကိုဖတ်ရန်နှင့်ပို့ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားလျှို့ဝှက်ထားလိမ့်မည် အချက်အလက်များ၏အဆက်ပြတ်
WhatsApp တွင်ဝှက်ထားရန်နှင့်ကျွန်ုပ်၏မက်ဆေ့ခ်ျများကိုအွန်လိုင်းပေါ်မလာဘဲဖတ်ရှု။ ပြန်ကြားနိုင်ရန်ဤအခြားအက်ပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။